COVID-19: notokanan'i Vietnam ny seranam-piaramanidina lavitra ho an'ny sidina tonga avy any Korea Atsimo
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » COVID-19: notokanan'i Vietnam ny seranam-piaramanidina lavitra ho an'ny sidina tonga avy any Korea Atsimo
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • fivoriana • Vaovao • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany • Vaovao Mafana Vietnam
20200303 2736884 1 1
Tamin'ny 3.30pmon 1 martsa, ny sidina Vietnam VJ961 nitondra mpandeha 229 avy any Incheon (Korea atsimo) dia tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Van Don any avaratra atsinanan'i Vietnam.
Ity no sidina voalohany niainga avy any Korea Atsimo hidina amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Van Don hatramin'ny nanambaran'ny manampahefana sivily fiaramanidina sivily ao Vietnam fa hijanona tsy handray sidina avy any Korea Selatan ny seranam-piaramanidina sivily Noi Bai any Hanoi sy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Tan Son Nhat any Ho Chi Minh City. 1 hariva ny 1 martsa 2020.
Tao anaty sidina VJ961 dia olon-dehibe 227 sy ankizy roa, ao anatin'izany ny teratany Vietnamianina 221 ary vahiny valo. Ny harivan'io ihany, tamin'ny 8.40 alina, ny sidina VN415 (Vietnam Airlines) avy any Korea atsimo dia tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Van Don, nitondra mpandeha 140, nahitana mpandeha vahiny 13.
Ny andro manaraka, ny seranam-piaramanidina any avaratra atsinanan'i Vietnam dia nanohy nahazo sidina roa ka hatramin'ny telo avy any Korea Atsimo isan'andro.
Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Van Don dia iray amin'ireo seranam-piaramanidina telo any Vietnam izay nahazo alalana manokana avy amin'ny governemanta Vietnamese handray sidina avy amin'ireo faritra heverina ho ivon-toeran'ny COVID-19.
Ny seranam-piaramanidina, izay hita ao amin'ny faritanin'i Quang Ninh, fonenan'i Halong Bay malaza eran-tany, dia efa nahazo sidina roa avy any Shina tamin'ny 1 febroary sy 10 febroary tao anatin'ny hetsika tohanan'ny governemanta hamindra ireo olom-pirenena Vietnamianina nonina teo akaikin'i Beijing sy Wuhan.
Ny seranam-piaramanidina roa hafa navela handray sidina avy amin'ny faritra voakasik'izany dia ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Can Tho ao amin'ny tanànan'i Can Tho (any atsimo andrefan'ny Vietnam) ary ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Phu Cat any amin'ny faritanin'i Binh Dinh (Vietnam afovoany).
Tamin'ny 1 martsa lasa teo, sidina telo hafa avy any Korea atsimo, izay nitondra vahiny 627, no tonga ihany koa tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Can Tho. Ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Van Don, toy ny sidina manokana roa hanesorana ireo mpandeha avy any Chine, ny mpandeha rehetra ao anaty sidina dia samy sidina avy any Korea ny 1 martsast namakivaky ny fomba amam-panao fifindra-monina ary koa ny fizaham-pahasalamana sy ny fomba famonoana otrikaretina ivelan'ny seranam-piaramanidina mba hampihenana ny loza mety hitranga amin'ny hafa ary hiantohana ny fiatraikany amin'ny asa ankapobeny eny amin'ny seranam-piaramanidina.
Ny fikambanana Quarantine ho an'ny fitsaboana iraisam-pirenena koa dia niara-niasa tamin'ny departemanta mifandraika amin'ny seranam-piaramanidina mba hanara-maso ny dingana rehetra amin'ny fizotrany. Araka izany, nameno ny fanambaràna ara-pitsaboana tao anaty sambo ireo mpandeha. Nampandrenesina mazava tsara ihany koa izy ireo momba ny dingana rehetra tokony hatao raha vantany vao tafavoaka izy ireo.
Rehefa avy nanadio ny fifindra-monina izy ireo ary namakivaky faritra samihafa, izay nanadihadian'ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana azy ireo ary avy eo dia novonoina ho faty, dia nafindra tany amin'ny faritra voafantina manokana tao anaty fiaran'ny tafika an'ny Komandy Miaramila. Ny mpandeha rehetra ao anaty sidina dia handany 14 andro amin'ny karantina. Ireo mpandeha avy any ivelany izay tonga tany Vietnam avy any Korea dia handeha hamaky karantina ao amin'ny tanànan'ny Cam Pha sy ny tanànan'i Ha Long araka ny fitsipiky ny Komitin'ny Vahoaka any amin'ny faritanin'i Quang Ninh.
Rehefa nahazo ireo sidina roa avy any Korea Atsimo ny solontenan'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Van Don dia nanamarika fa ny seranam-piaramanidina izao dia nandray sidina marobe avy any amin'ny faritra afovoan'ny valanaretina COVID-19. "Ny fizotran'ny fahazoana ny sidina tsirairay avy dia mifanaraka tanteraka amin'ny lalàna mifehy ny quarantine iraisam-pirenena, izay ankasitrahan'ny besinimaro," hoy ny solontena.
Nisy fomba fiasa sahala amin'izany natao tao amin'ny seranam-piaramanidina roa hafa tao amin'ny tanànan'i Can Tho sy any amin'ny faritanin'i Binh Dinh ho an'ireo sidina rehetra avy amin'ny faritra heverina ho ivon-toeran'ny valanaretina COVID-19.
Na eo aza ny fanakaikezany ireo firenena eo alohan'ilay valanaretina, ary na eo aza ny tranga mihabe sy ny fahafatesan'ny aretina vaovao COVID-19 manerana izao tontolo izao, dia nanambara ny manampahefana Vietnam fa voafehy ny raharaha any Vietnam ary tsy nisy ny maty maty.
Ny Ivotoerana Amerikanina misahana ny fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) ny 27 febroary dia nanala an'i Vietnam tsy ho ao anatin'ny lisitry ny toerana mora tohina amin'ny famindrana ny fiarahamonina COVID-19, manonona ny hetsika feno ataon'i Vietnam manohitra ny valanaretina. Handefa delegasiona koa ny CDC amin'ny volana martsa hanatsara ny fiaraha-miasa ara-pahasalamana eo amin'i Etazonia sy Vietnam. Izy io koa dia mikasa ny hanangana biraom-paritra CDC ao amin'ny firenena.